किन पूजाले मात्रै ‘तँ’ भन्न पाउँछिन् ? « Ramailo छ
किन पूजाले मात्रै ‘तँ’ भन्न पाउँछिन् ?
प्रकाशित मिति : Jun 6, 2017
सफल फिल्म ‘प्रेम गीत’ मा नायिका पूजा शर्माले बोले मध्येको एउटा संवादलाई अहिले पनि दर्शकले सम्झिने गर्दछन् । ‘तँ त मैंले मात्र भन्न पाउँछु’ भन्ने संवाद म यस्तो गीत मा पनि राखिएको छ । सोमबार बागबजारको सिने जोन स्टुडियोमा पूजा यही संवाद बोल्दै थिइन्, निर्देशक तथा निर्माता सुदर्शन थापा पूजालाई गाइड गर्दै थिए । नायक पल शाहको भने डविङ सकिइसकेका छ ।
पल र पूजाको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु ‘मा ‘फेरि एकचोटी बच्चा हुन पाए, त्यही तन्नेरी अवस्थामा जिउँन पाए, अर्को जुनी पनि तिमीसँगै लिन पाए’ साहित्यिक संवाद पनि छन् । अरु कस्ता-कस्ता संवादहरु छन् त ? ‘केही प्रोमोमा आउँछ बाँकी सबै फिल्म रिलिज भएपछि थाहा हुन्छ’ पूजाले भनिन् । सुरुमा सार्वजनिक गरिएको ‘भन्छु आज’ गीत हिट भैसकेका कारण फिल्म सोचे भन्दा राम्रो हुने आशा रहेको पूजाले बताइन् । फिल्मको प्रोमो यही शुक्रबार रिलिज हुँदैछ । टिम प्रचार प्रसारमा व्यस्त छ ।